Media आउट-अफ-द-बक्स तरिका सामाजिक मिडियाको साथ तपाईंको एसईओ सुधार गर्ने - Semalt बाट इनसाइट
के तपाइँ खोज ईन्जिनमा तपाइँको रैंकिंग राम्रो गर्न चाहानुहुन्छ?
के तपाइँसँग तपाइँको एसईओ प्रदर्शन वृद्धि गर्न सोशल मिडिया को उपयोग गर्न मा रुचि छ?
सोशल मिडियामा तपाइँको खोज परिणामहरु मा पर्याप्त फाइदाहरु छन्, र एक स्पष्ट सामाजिक प्रभुत्व खोज स्थिति बढाउन सक्छ।
यस लेखनमा, जेसन एडलर, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, पाँच तरिकाहरू प्रदान गर्दछ, जसको माध्यमबाट, तपाईं आफ्नो खोज रैंकिंग राम्रो गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
# १: तपाईंको सामाजिक नेटवर्कको साथ लिंक स्थापना गर्नुहोस्
पहिले, गुगलको श्रेणीकरण लि building्क निर्माणमा आधारित थियो कुनै व्यक्तिले विचार गरिरहेको लिंकको गुणस्तरको परवाह नगरी। पछि, गुगलले लिंकको क्वालिटीलाई विचार गर्न थाल्यो कि यो कुरा थाहा पाएपछि कि व्यक्तिहरूले नक्कली लिंकहरूको प्रयोगमार्फत क्रमबद्ध हेरफेर गरिरहेका थिए।
किनकि सामाजिक साइटहरू वेब अधिकारमा आधारित छन्, यी साइटहरूमा लिंक प्रायः उच्च गुणको रूपमा लिइन्छ। जहाँसम्म तपाइँसँग नयाँ फेसबुक पेज छ, फेसबुकको पूर्ण अधिकारको कारण यो उच्च स्थानमा पर्नेछ।
# २: तपाईका अनुयायीहरूको संख्या बढाउनुहोस्
साइटहरूको एक ठूलो संख्याको उच्च गुणवत्ताको अनुयायीहरू उत्तम खोज ईन्जिनमा छन्। उच्च मूल्या rated्कन गरिएका अनुयायीहरू तपाईंको सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा छन्, र यी व्यक्तिहरूको एक महत्त्वपूर्ण संख्याले केही तरिकामा अन्तर्क्रिया गर्दछ वा संलग्न गर्दछ।
वार्तालाप तपाईंको सामग्री रिट्वीट, पिन संशोधन, Google+ मा समीक्षा लेख्न वा तपाईंलाई एक ट्वीट पठाउनको रूपमा हुन सक्छ। त्यस्तै रूपमा, तपाईका अनुयायीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दैछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
#:: यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री साझेदारी योग्य र खोजी योग्य छ
Pinterest जस्ता सामाजिक प्लेटफर्मले तपाइँको जानकारी साझा र साझा गर्न योग्य बनाउँदछ। मञ्चले साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रेरणा दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको बोर्डमा उनीहरूको रुचिको पिन पोष्ट गर्छन् र यसलाई अन्य Pinterest फ्यानहरूमा फैलाउँदछन्।
उदाहरण को लागी, तपाई फेसबुक खोजी सर्च ईन्जिनमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक गोपनीयता सेटिंग ट्याबमा गएर र अन्य खोजी ईन्जिनलाई सक्षम गरेर तपाईंको टाइमलाइनमा लिंक गर्न।
#:: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका पोष्टहरूले कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्दछ
कुञ्जीशब्दहरू तपाईंको साइट, सशुल्क विज्ञापन अभियानहरू, र ब्लगका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, र यसरी तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुन्न कि किवर्डहरू तपाईंको सामाजिक सामग्रीको साथ महत्त्वपूर्ण छन्।
Pinterest मा, खोज इञ्जिनमा राम्रो स्थितिमा श्रेणीकरण गर्ने निश्चित तरिका भनेको तपाइँको बोर्ड वा पिनहरूमा कुञ्जी शव्द छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। त्यस्तै, यूट्यूब भिडियोहरूको लागि अनुसन्धान गर्दै ब्लग, च्यानल, र वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउन सक्दछ यदि ती तपाईंको प्रोफाईलमा हाईलाइट गरियो भने।
तपाईको फेसबुक पोष्टहरूमा कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्दा राम्रो क्रममा पनि आउन सक्छ।
कुञ्जीशब्दहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंको सामग्री खोजी योग्य छ र प्रयोगकर्ताहरूले ती शब्दहरूको लागि खोजी गर्दा तपाईंको सामग्री पप अप गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछ।
#:: स्थानीय सूचि बनाउनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको उद्यमसँग गुगल + मा अनुकूलित लिस्टिंग छ जुन तपाईंको उपयुक्त डाटा र ठेगाना छ। यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई सीधा गुगल मा तपाइँको संगठन को समीक्षा गर्न सक्षम हुनेछ।
सामाजिक साइटहरूलाई मार्केटिंग हस्तक्षेपको रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिश गरिएको छ, तर यसलाई अझ बढाइ दिन सकिन्छ एसईओ बढाउनको लागि यसलाई बढावा दिन।
एक निश्चित हुन सक्दछ कि सामाजिक साइटहरूले स्तर निर्धारण गर्न सक्छ।